बाढी पीडित ३० परिवारलाई राहत – SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ अर्थ ∕ बाढी पीडित ३० परिवारलाई राहत
बाढी पीडित ३० परिवारलाई राहत
Sindhu Khabar असार २५, २०७७ गते १८:४६ मा प्रकाशित
अविरल वर्षाका कारण बाह्रविसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा आएको बाढीबाट विस्थापित भएकाह?लाई राहत वितरण गरिएको छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विस्थापितह?लाई तत्कालका लागि राहत प्रदान गरेको हो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पीडित ३० परिवारलाई राहत वितरण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए । टेन्ट, मेट्रिक्स, त्रिपाल, भाँडा सेट, कम्बल, कपडालगायतको सामग्री वितरण गरिएको छ ।
अबिरल बर्षापछि आएको बाढीले भोटेकोसी नदि करिडोरका तीन बस्तीमा जनधनको क्षति भएको छ। ब’धबार मध्यरातमा आएको बाढीले वितण्डा मच्चाउँदा ३३ घर बगाएको छ . बाढीले बगाएका २० बेपत्ता छन् . द’ई जनाको मृत्य’ भएको छ ।